Waa kuma ninka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ah ee xog hayaha Qaramada Midoobau u qaabilsan Soomaaliya? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Waa kuma ninka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ah ee xog hayaha...
Waa kuma ninka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ah ee xog hayaha Qaramada Midoobau u qaabilsan Soomaaliya?
Xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa wakiilkiisa gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay James Swan, oo ah diblomaasi u dhashay dalka Mareykanka.
Mr Haysom ayaa Soomaaliya ka tagay ka dib markii ay ka eriday dowladda Soomaaliya, oo ku eedeysay inuu ku xad gudbay howlaheeda khaaska ah.
War saxaafadeedka Qaramada Midoobay ayaa lagu yidhi: “Mr Swan waxa uu khibraddiisa shaqo inteeda badan ku qaatay waddamada qaaradda Afrika, wuxuuna wajahay xaalado adag oo siyaasadeed iyo xilliyo kala guur ah. Waxa uu Danjiraha Mareykanka u fadhiya Koongarada Dimuqraaddiga ahaa intii u dhaxeysay sanadihii 2013-kii ilaa 2016-kii, wuxuu sidoo kale ahaa wakiilka khaaska ah ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadihii 2011-kii ilaa 2013-kii, halka Danjiraha Jabuuri uu ahaa intii u dhaxeysay 2008-dii ilaa 2011-kii”.
Waxa uu sidoo kale muddo hal sano ah oo u dhaxeysay 2005-tii ilaa 2006-dii soo noqday Agaasimaha Afrika ee hay’adda sirdoonka iyo cilmi barista ee Mareykanka.
BBCSomali: dowladda Soomaaliya waxay dhawr jeer horrey sheegeen inay diyaar u yihiin inay wada hadal la galaan alShabaab hadday dagaalka joojineyso. Marka idinku ma kala tashateen amsuuliyiinta Soomaalida inta aadan go’aankan gaarin?
Ambassador Swan: Dowladda Soomaalidu iyadaaba war ay ku taageereyso go’aankeena soo saartay, aad ayaan ugu kalsoonahay in barnaamijkan uu heysto taageero, laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo in barnaamijka dhiiri gelinta caddaaladdu uu yahay hal qeyb oo ka mid ah hawl aad uga weyn iyada oo tifaftiran oo la rabo in looga tkahaluso khatarta alShabaab.
Waxaa kale oo jira dadaal looga xirayo Shabaab ilaha dhaqaaluhu ka soo galo, waxaa ka mid ah go’aankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu gaaray Febraury 20 ee lagu mamnuucayay dhoofinta dhuxusha oo il dhaqaale oo muhiim ah u ahayd alShabaab. Arrintaasna waa xagga dhaqaalaha.
Previous articleBadhasaabkii Gobolka Awdal Oo Dib Ugu Soo Laabtay Magaalada Borama.
Next articleNin la aasi waayey ilaa uu wiilkiisa madaxweyne ka noqdo